रसियाले बनाएको भ्याक्सिनप्रति अमेरिकाको आशंका « Pariwartan Khabar
रसियाले बनाएको भ्याक्सिनप्रति अमेरिकाको आशंका
13 August, 2020 6:43 pm
२०७७ साल साउन २७ गते नेपाली समय दिनको तीन बजेतिर सीएनएन टेलिभिजनले सानो समाचार प्रसारण गरेको थियो, “रसियाले बिश्वमै पहिलो पटक कोरोना भाईरस बिरूद्धको खोपलाई मान्यता दिएको छ ।” त्यसपछि सिएनएनले यो समाचारलाई त्यसदिन खासै लम्ब्याएन । मैले त्यसदिन उत्सुकतापूर्वक अन्य बिश्वका न्यूज च्यानलहरूमा यो समाचारको खोजी गर्न थाले । आर टी टेलिभिजनले भने यस समाचारलाई महत्वकासाथ प्रसारण गरिरहेको रहेछ ।
आर टी टेलिभिजनले दिएको समाचार अनुसार रसियाका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले यो खोपलाई मान्यता दिईएको घोषणा गरेका रहेछन् । पुटिनले यो खोप सुरूमा आफूले लिने ईच्छा पनि ब्यक्त गरेका थिए रे । समाचार अनुसार कोरोना भाईरस संक्रमित राष्ट्रपति पुटिनको छोरीले यो खोप सुरूमा लिएकी थिईन र खोप लिइसकेपछि उनले सहज महशुस गरेकी थिईन् र उनको स्वास्थ्य अहिले ठिक रहेको छ ।
यसपछि तुरून्तै फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुईट्रेले रसियाको तारिफ गर्दै खोपको परीक्षणमा आफू पनि सहभागी हुने ईच्छा ब्यक्त गरेका थिए । उनले भनेका छन्, “यो खोपको प्रयोग पहिले म माथि पनि गर्न सकिने छ ।” साथै रोड्रिगोले यो पनि भनेकी यो खोपको उत्पादन ठूलो संख्यामा फिलिपिन्समा पनि गर्न सकिनेछ ।
अहिले रसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ कि खोप पूर्ण सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको छ । तर बिबिसीले भने त्यसैदिन सानो समाचार प्रसारण गर्दै भनेको थियो कि रसियाले यति चाँडै खोप बनाएकोमा आशंका पैदा भएको छ ।
रसियाले बनाएको भनिएको कोरोना भाईरस बिरूद्धको यो खोप गामालेय ईन्स्टिच्युटले निर्माण गरेको हो र यो खोपको नाम दिईएको छ, “स्पुतनिक भी” । स्मरण रहोस् सोभियतसंघ ताका तत्कालिन रुसले संचालन गरेको अन्तरिक्ष अभियानको नाम स्पुतनिक थियो जुन अभियानले तत्कालिन रूसलाई अमेरिकासँगै बिश्वको सुपर पावरमा दर्ज गराएको थियो ।
समाचार अनुसार अहिले रसियाले बनाएको भनिएको यो खोपले मानिसको शरीरमा लगाएपछि कम्तिमा दुई बर्षसम्म काम गर्नेछ ।
भोलिपल्ट २०७७ साल साउन २८ गतेदेखि भने रसियाले बनाएको यो खोपको बारेमा बिश्वब्यापी चर्चा भएको देखिन्छ । अहिले बिश्वका प्रमुख न्युज च्यानलहरू सबैले यसको चर्चा गर्न थालेका छन् । तर, संसारमै चलाख भनेर चिनिने रसीयनहरूको यो कार्य माथि अहिले कत्ति समाचार च्यानलहरूले संशय ब्यक्त गरेर समाचारहरू प्रशारण गर्न सुरू गरेको देखिन्छ ।
सुरू देखिनै रसियाले फास्ट ट्रयाकमा बनाउँदै गरेको यो भ्याक्सिन प्रति डब्लूएचओले शंका ब्यक्त गरेको थियो । अहिले डब्ल्यूएचओले भनेको छ, “रसियाले बनाएको भनिएको खोप अहिले तत्कालै हामीले नलगाऔं । यसको बारेमा गम्भिर समिक्षा गर्न जरूरी छ । खोपको प्री–क्वालिफिकेशनको लागि छलफल सुरू गर्ने बारेमा हामी सोच्दै छौं ।” डब्ल्यूएचओले हाल अन्तिम परीक्षणको चरणमा रहेका भनिएका छ ओटा खोपहरूको सूचीमा रसियाले बनाएको यो खोप परेकै छैन ।
उता जर्मनीका स्वास्थ मन्त्रीले भनेका छन् कि रसियाले बनाएको यो खोप धेरै सन्देहपूर्ण छ ।
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशाशनले रसियनले बनाएको यो भ्याक्सिन प्रति प्रश्न उठाएको छ । अमेरिकी स्वास्थ बिज्ञहरु भन्छन्,“रसियाले बनाएको भ्याक्सिन अमेरिकी जनता र बाँकी विश्वका जनताहरूको लागि सुरक्षित हुनुपर्दछ जसमा हामीलाई शंका छ । परीक्षण तथ्यांक बिना नै यति चाँडो रसियाले भ्याक्सिन बनाएको कुरा सुनेर हामीहरू चिन्तित भएका छौं ।”
यसै प्रसंगमा प्रख्यात अमेरिकी स्वास्थ बिज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाऊचीले भनेका छन्, “रसियाले बनाएको यो भ्याक्सिन प्रभावकारी र सुरक्षित रहेको कुरामा मलाई गम्भिर रूपमै शंका लागेको छ ।” सिएनएन टेलिभिजनले त रसियालाई उडाउँदै भनेको छ कि हिजो सोभियतसंघ ताका स्पुतनिक अन्तरिक्ष अभियानबाट सुपर पावर बनेको धङधङी रसियाले भ्याक्सिन निर्माण प्रक्रियामा देखाउन खोजेको छ त्यो पनि उपयुक्त परीक्षण बिना नै ।”
तर रसियाले पछिल्लो चरणमा यसको खण्डन गर्दै भनेको छ कि हामीले बनाएको यो खोप असुरक्षित छ भन्ने कुरा तथ्यहीन छ । अब रसियामा यो भ्याक्सिन आउँदो अक्टोबरबाट आम मानिसमा लगाउन सुरू गरिनेछ ।
यसरी, बिश्वको आजको सुपर पावर अमेरिकाले कोरोना भाईरस बिरूद्धको खोप निर्माणमा आफ्नो बर्चस्व र अपनत्व बिना यो भ्याक्सिन बिश्व समुदायमा ग्राह्य हुने कुरा असम्भव नै हुने कुरा बिश्वलाई देखाईरहेको छ चाहे त्यो उसको शर्तमा आफूले रुचाएको अन्य देशहरुको सहकार्यमा नै किन नहोस् (जस्तोकि बेलायत) । अहिले गुम्दै गएको आफ्नो विरासतको पुनः प्राप्तीको आशमा अमेरिका कोरोना भाईरस बिरूद्धको भ्याक्सिन निर्माण गरेर आफू सुपर पावर रहिरहेको सन्देश यो बिश्वलाई दिन पनि चाहन्छ सायद ।
अर्को यथार्थता यो पनि हो कि बिगत कयौं वर्षदेखि अहिलेसम्म अधिकांश बिश्व बिज्ञान, प्रबिधी, आविस्कार र गुणस्तरमा अमेरिकालाई नै बिश्वास गर्दै आईरहेको देखिन्छ । यो शंकाको लाभ पनि खोप निर्माणमा अहिले अमेरिकाले लिन खोज्नु स्वाभाविक छ ।
साथै राजनीति यो पनि हुन सक्छ कि बिगत पाँच बर्षदेखि रसिया बिरूद्ध आर्थिक नाकाबन्दी गरेको अमेरिका तथा बाँकी यूरोपले यो अवसर सहजै रसियालाई कसरी दिन सक्छन् र ? बिज्ञान पनि त यो संसारमा बेला–बेलामा राजनीतिले लपेटिने गरेको हामीले पटक–पटक देख्दै र भोग्दै आईरहेकै छौं । हैन त ?
अहिले अमेरिकी स्वास्थ बिज्ञहरु नै भनिरहेका छन् कि अमेरिकामा कोरोना भाईरस बिरूद्धको खोप कम्तीमा सेप्टेम्बर भन्दा यता तयार गर्न असम्भव जस्तै छ ।
तर रसियाको यो निर्णयले भने खोप निर्माणमा स्वयम् अमेरिकालाई अब हतारो र दबाबमा ल्याउने भने निश्चित छ ।